Wasiir Bayle: “46% Miisaaniyadda dowladda beesha caalamka ayaa bixisa” | Baydhabo Online
Wasiir Bayle: “46% Miisaaniyadda dowladda beesha caalamka ayaa bixisa”
Wasiirka Maaliyadda Xukuumadda Federalka Somaliya C/raxmaan Ducaale Bayle, ayaa sheegay in miisaaniyada dowladda Federalka Somaliya kala bar ay ku tiirsan tahay deeqaha ka yimaada Beesha caalamka.
Wasiir Bayle, ayaa sheegay miisaaniyada dowladda Somaliya inay tahay $260 Milyan, $120 ka mid ahna laga sugo Deeq bixiyeyaasha taageera Somaliya,taas oo ka dhigan in miisaaniyadda dowladda ay 46%ka timaado beesha Caalamka halka 54% ay dowladda isku tashato.
Wuxuu sheegay xaaladda markii ay sidaasi tahay in la dareemi karo culeyska dhaqaale ee jira, iyo in Somaliya weli aysan gaarin isku filnaansho dhanka dhaqaalaha ah, maadaama weli ay ku tiirsan tahay taageerada Beesha caalamka.
“Hadaa nahay Soomaali inta caalamku shaqeeyo laba jibarkeed waa in la shaqeeyo, si dalkaan meesha uu joogo looga hormariyo, waxaa jira wadamo aan khayraad lahayn, lakiin dadkooda ay ka go’an tahay in ay wax qabsadaan.” ayuu yiri wasiir Bayle oo dhanka kale xusay in miisaaniyadda dalka ay tahay $260 milyan, $120 milyan oo ka mid ah ahna laga sugo deeq bixiyayaasha caalamka, sidaas daraadeena uu qof walba dareemi karo culayska dhaqaale ee dowladda haysta.
Ku tiirsanaanta Dowladda Federalka Somaliya dhaqaalaha ka yimaada Beesha caalamka ayaa muujinaysa in Somaliya weli aaney gaarin isku filnaansho buuxa, xilli Dakadda Muqdisho iyo Garoonka Diyaaradaha dowladda ay ka soo galaan dhaqli aad u fara badan.
Shaqaalaha dowladda ayaa inta badan ku dhiban helida xuquuqda ay ku leeyihiin dowladda, xilli shaqaalaha rayidka ay ku shaqeeyaan duruufo adag.